Willian Hague, Wasiirka Arrimaha Dibada ee Britian oo ku taliyey in codeynta doorashadu noqoto qaab qarsoodi ah – idalenews.com
Willian Hague, Wasiirka Arrimaha Dibada ee Britian oo ku taliyey in codeynta doorashadu noqoto qaab qarsoodi ah
Wasiirka arimaha dibada ee Britain Wllium Hague ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta lagu hayo hawlaha la xiriira doorashada Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Wasiirku ayaa sidoo kale soo dhaweeyay eedaha loo soo jeediyay masuuliyiinta ugu sareysa dowlada Soomaaliya ee la xiriirta lunsashada hanti fara badan oo shacabku lahaa. “Waxaan aad uga xumahay warka ku saabsan inaan dumarka laga siin xubnihii ay baarlamaanka kulahaayeen ayuu yiri willuem hague”
Dowlada Ingiriiska ayaa sidoo kale cambaareysay laaluush cagajugleynta iyo musuq maasuqa la sheegayo inuu hareeyay soo xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiirka arimaha dibada dalka Ingiriiska Willuem Hague ayaa dhanka kale walaac kamuujiyay xiliga Dowlada Soomaaliya oo ku eg 20-Bishan Aug inaan lahelin dowladii bedeli lahayd mida hada uu waqtigeedu dhamaanayo
Dhanka kale wuxuu soo dhaweeyay ansixinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya oo dhawaan la meel mariyey.
Hague ayaa ugu danbeyntii kula taliyay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku hawlan hawsha doorashada in codbixinta ay u dhacdo qaab qarsoodi ah iyadoo la isticmaalayo sanaadiiqda qafilan ee doorashooyinka.
Hadalka kasoo baxay dowlada wadanka Ingiriiska ayaa imaanaya xili uu buuq weyn kajiro qaabka doorashada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo qaar kamid ah la shaaciyay magacyadooda halka inta dhimana la sugayo in lagu dhawaaqo saacadaha soo aadan si loo dhaariyo islamar ahaantaana ay u guda galaan hawsha looga fadhiyo oo ah iney dhisaan dowlad ay Soomaaliya yeelato oo aan ku meel gaar ahayn
Siyaasi ka soo jeeda beesha 5aad oo dhaliiley qaabka qaar xubnaha cusub ee Barlamaanka ku yimaadeen
Kulan Gudoomiyihii hore ee Barlamaanka Shariif Xasan iyo Mahiga dhexmarey oo Fashil ku dhamaadey, Maxaase loo sheegey Shariif Xasan